Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Gunyana 18, 2018
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanovhura paramende yechipfumbamwe zviri pamutemo vachiti dare iri richazeya nekugadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisirwo emabhizimisi, kurwisa huwori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu.
Nhengo dzeMDC dzinobuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi VaMnangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo, VaNelson Chamisa, ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunynage hazvo dare reConstitutional Court rakati VaMnangagwa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya mashoko aVaMnangagwa avatura mudare nhasi pasi pechirongwa che State of the Nation Address.
Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kuMasvingo vodya marasha zvichitevera kudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munyika sezvo zvikoro zvisina kugadzirira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera.
Simba remari ye bond note roramba richipera izvo zvava kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamurambamhuru ichikwira.
Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zvaturwa muparamende naVaMnangagwa apo vataura muhurongwa hwe state of the nation address.